Izindaba - Yiziphi izinqubomgomo zaseChina zokuxhasa ukuthuthukiswa okunamandla komkhakha wokuphrinta nokupakisha?
Ngokwezifiso Iphepha Lesikhwama
Ibhokisi Lephepha Ngokwezifiso
Yiziphi izinqubomgomo zaseChina zokuxhasa ukuthuthukiswa okunamandla komkhakha wokuphrinta nokupakisha?
Njengoba imboni yokuphrinta nokupakisha inekhono eliqinile lokumunca abasebenzi, nezinga lokungcola kwemvelo liphansi uma kuqhathaniswa, ohulumeni bamazwe nabasekhaya bakuxhase kakhulu. Eminyakeni yamuva nje, uhulumeni wase-China ukhiphe inqwaba yezinqubomgomo zezimboni ezihlobene nomkhakha wokuphrinta nokupakisha iphepha.
1. "Isimemezelo Sokusetshenziswa Kokuphrinta Okuluhlaza"
Ngo-Okthoba 2011, i-General Administration ye-Press and Publication kanye noMnyango Wezokuvikelwa Kwezemvelo bakhipha “Isimemezelo Sokusetshenziswa Kokuphrinta Okuluhlaza” futhi banquma ukusebenzisa ngokuhlanganyela ukuphrinta okuluhlaza. Ububanzi bokuqaliswa kufaka phakathi imishini yokukhiqiza yokuphrinta, izinto ezingavuthiwe nezisizayo, izinqubo zokukhiqiza kanye nokushicilelwa, Ukupakisha nokuhlobisa nezinye izinto eziphrintiwe, okubandakanya yonke inqubo yokukhiqiza yemikhiqizo ephrintiwe.
Ngaphezu kwalokho, sizokwakha uhlaka lokuphrinta oluhlaza embonini yokuphrinta, sakha ngokulandelana futhi sishicilele amazinga wokuphrinta aluhlaza, futhi kancane kancane sikhuthaze ukuphrinta okuluhlaza emkhakheni wezikweletu, amathikithi, ukudla nokupakelwa kwezidakamizwa, njll .; ukusungula amabhizinisi okukhombisa ngokushicilela okuluhlaza nokukhipha izinqubomgomo ezifanele zokuphrinta okuluhlaza.
2. "Imihlahlandlela Yokuthengwa Kokuluhlaza Kwamabhizinisi (Isivivinyo)"
Ukuze ukhuthaze ukwakhiwa komphakathi osindisa izinsiza futhi onobungani bemvelo, uqondise futhi uthuthukise amabhizinisi ukuze afeze ngenkuthalo izibopho zawo zokuvikela imvelo, asungule uchungechunge lokuphakelwa okuluhlaza, futhi azuze ukuthuthukiswa okuluhlaza, okunekhaboni ephansi kanye nokuyindilinga, ngoDisemba 22, 2014 , UMnyango Wezohwebo, owake waba nguNgqongqoshe Wezokuvikelwa Kwezemvelo, uMnyango Wezezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi ngokuhlanganyela wakhipha “Imihlahlandlela Yokuthengwa Kokutholakala Kokulima Kwebhizinisi (Isivivinyo)”, eyaphakamisa ukuthi:
Khuthaza amabhizinisi ukuthi athuthukise inqubo yokuthengwa kwempahla, abambe iqhaza ngenkuthalo ekuthuthukisweni komkhiqizo kanye nasenqubeni yokukhiqiza, futhi aqondise abahlinzeki ukuthi banciphise ukusetshenziswa kwezinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene kanye nezinto zokupakisha ngokuhlaziywa kwenani nangezinye izindlela, bese bezifaka esikhundleni sezinto ezingavikela imvelo kakhulu ukugwema noma ukunciphisa ukungcoliswa kwemvelo;
Khuthaza izinkampani ukuthi zidinge abahlinzeki ukuthi baphakele imikhiqizo noma izinto zokusetshenziswa ukuhlangabezana nezidingo zokupakisha okuluhlaza, hhayi ukusebenzisa izinto ezinobuthi noma eziyingozi njengezinto zokupakisha, ukusebenzisa izinto zokupakisha ezingaphinde zisebenze, ezonakalisayo noma ezingenabungozi, zigweme ukupakisha ngokweqile, futhi zihlangane neNgaphansi kwesisekelo yokufunwa, ukunciphisa ukusetshenziswa kwempahla yokupakisha;
Abathengi nabaphakeli bangakhuthaza ukusetshenziswa okuluhlaza emphakathini wonke ngokumelana nokupakishwa ngokweqile kwezimpahla, baqondise abathengi ukuthi babambe iqhaza ekusetshenzisweni okuluhlaza, futhi banciphise ukusetshenziswa kwemikhiqizo elahlwayo nezikhwama zokuthenga zepulasitiki;
Amabhizinisi akufanele athenge imikhiqizo engahlangabezani nezidingo zeziphathimandla zezentengiselwano ezinekhono ukuvimbela ukupakisha ngokweqile nokukhuthaza ukusetshenziswa kabusha.
Uma kubhekwa izidingo ezifanele zalo mhlahlandlela, imikhiqizo yokuphrinta eluhlaza kanye nezinsizakalo zihlangabezana nezidingo zokuthengwa okuluhlaza, okuzoletha amathuba amasha okuthuthuka okuzayo kwamabhizinisi wokuphrinta oluhlaza kanye nabakhiqizi bezinto eziluhlaza nezisizayo ezweni lami. Ukuguqulwa okuluhlaza kuzodlala indima ebalulekile ekukhuthazeni.
3. “Yenziwe eChina 2025 ″
NgoMeyi 2015, uMkhandlu Wombuso wakhipha uhlelo lwamasu oluthi “Made in China 2025.. "I-Made in China 2025 a uhlelo lwezwe lokuqinisa ukukhiqizwa okuphezulu, futhi kuyishumi leminyaka lokuqala lokusebenza isu le-" Iminyaka Emashumi Amathathu "lokwakha iChina njengamandla okukhiqiza.
Uhlelo luhlongoza ukusheshisa uguquko oluhlaza nokwenziwa ngcono komkhakha wezokukhiqiza, kukhuthaze ngokuphelele ukuguqulwa okuluhlaza kwezimboni zokukhiqiza zendabuko ezifana nensimbi, izinsimbi ezingenayo i-ayoni, amakhemikhali, izinto zokwakha, imboni elula, ukuphrinta nokudaya, ngamandla ukuthuthukisa nokukhuthaza ukuluhlaza ubuchwepheshe nemishini, futhi babone ukukhiqizwa okuluhlaza; ukusheshisa ukukhuthazwa kwesizukulwane esisha sobuchwepheshe bolwazi nokukhiqiza ukuhlanganiswa kweTekhnoloji nentuthuko, kanye nokukhiqiza okuhlakaniphile njengokuhola okuyinhloko kokuhlanganiswa okujulile kwezimboni nokwaziswa.
Kuyadingeka ukugxila ekwakhiweni kwemishini ehlakaniphile nemikhiqizo ehlakaniphile, ukukhuthaza ukuhlakanipha kwezinqubo zokukhiqiza, ukuhlakulela izindlela ezintsha zokukhiqiza, nokuthuthukisa ngokuphelele izinga lokucwaninga kwamabhizinisi nentuthuko, ukukhiqiza, ukuphathwa kanye nezinsizakalo. Ngokuzayo, ngokwenziwa okuqhubekayo kokukhiqizwa okuhlakaniphile, ukupakisha okuhlakaniphile nokuphrinta kuzoba yinkomba yokuthuthukiswa komkhakha esizayo.
4. "Isaziso ngohlelo lokunciphisa ama-Organic Compounds Reduction for Main Industries"
NgoJulayi 2016, uMnyango Wezezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi kanye noMnyango Wezezimali ngokuhlanganyela bakhipha “Isaziso soHlelo Lokuncishiswa Kwamakhemikhali Okuphambuka Kwezimboni Ezikhulukazi.” Ngokwezidingo ezihlosiwe zoHlelo, ngo-2018, ukukhishwa kwama-VOC emkhakheni wezimboni kuzoncishiswa ngamathani ayizigidi ezingama-3.3 uma kuqhathaniswa nango-2015.
I- “Plan” yakhetha izimboni eziyi-11 ezifaka o-inki, izinto zokunamathisela, ukupakisha nokuphrinta, ama-petrochemicals, ukumboza, njll., Njengezimboni ezibalulekile zokusheshisa ukwehliswa kwama-VOC nokwenza ngcono izinga lokukhiqizwa okuluhlaza.
“Uhlelo” lucacisa ngokusobala ukuthi imboni yokupakisha nokuphrinta kufanele isebenzise amaphrojekthi wezinguquko kwezobuchwepheshe, futhi ikhuthaze ukusetshenziswa kwama-inks aluhlaza (no) ama-VOC aphansi (ama-varnishes, izixazululo zomthombo, ama-ejenti wokuhlanza, ama-adhesives, ama-thinner nezinye izinto zokusetshenziswa nezisizayo ; Khuthaza ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokuphrinta obuguquguqukayo nobuchwepheshe obungenawo i-solvent, futhi kancane kancane unciphise ubuchwepheshe bokuphrinta be-gravure nobuchwepheshe obomile obuyinhlanganisela.
5. "Imibono Eqondisayo Ngokusheshisa Inguquko Nokuthuthukiswa Kwemboni Yezokupakisha Yezwe Lami"
NgoDisemba 2016, "Imibono Eqondisayo Ngokusheshisa Inguquko Nentuthuko Yezimboni Zokupakisha zaseChina" eyakhishwa nguMnyango Wezimboni Nezobuchwepheshe Bolwazi kanye noMnyango Wezohwebo yaphakamisa: ukubeka emaphaketheni njengomkhakha wezokukhiqiza ogxile ekusebenzeni; ukugxila emaphaketheni aluhlaza, ukupakisha okuphephile, ukupakisha okuhlakaniphile, nokupakisha okujwayelekile, Ukwakha uhlelo lobuchwepheshe bezimboni; ukuqinisekisa ukuthi imboni igcina ukukhula ngesivinini esiphakathi nendawo ukuya phezulu ngenkathi ithuthukisa amandla ayo okuthuthukisa ukuhlangana kanye namakhono okulima umkhiqizo; ukukhulisa utshalomali lwe-R & D ukukhulisa amakhono okuzimela okuphumelelayo kanye nokuncintisana kwamazwe omhlaba kubuchwepheshe obalulekile; ukwenza ngcono ulwazi lomkhakha, ezishintshayo kanye nezinga lezobunhloli.
Ngasikhathi sinye, kuyadingeka ukuqeda ukusetshenziswa okuphezulu namandla amakhulu embonini yokupakisha, ukusungula nokwakha uhlelo lokukhiqiza oluhlaza; ukuhola ukuqoqwa kwamakhono ayisisekelo wobuchwepheshe bokupakisha bezempi nezomphakathi, nokwenza ngcono izinga lokusekelwa kokuvikela ukupakisha kwemisebenzi yempi ehlukahlukene; nokwandisa uhlelo olusezingeni lomkhakha, bese uqhuba ngokufaka emaphaketheni Ukufakwa ezingeni eliphezulu kokuthengiswa kwempahla kuthuthukisa izinga lokuphatha elijwayelekile kanye nezinga lokulinganisa lomhlaba wonke.
6. "Uhlelo Lokuthuthukiswa Kwezimboni ZaseChina (2016-2020)"
NgoDisemba 2016, i- "China Packaging Industry Development Plan (2016-2020)" eyakhishwa yi-China Packaging Federation yabeka phambili umsebenzi wobuchule wokwakha amandla okupakisha, yagcizelela emisha emisha, ukugqobhoza ubuchwepheshe obubalulekile, nokukhuthaza ngokusobala ukupakisha okuluhlaza, ukupakisha okuphephile, nokupakisha okuhlakaniphile. Ukuthuthukiswa okuhlanganisiwe kokupakisha kuphakamisa ukuncintisana okuphelele ezindaweni ezibalulekile zemikhiqizo yokupakisha, imishini yokupakisha, nokupakisha nokuphrinta.
7. “Uhlelo Lokuthuthukiswa Kwemboni Yokuphrinta Esikhathini Seshumi Nantathu Sokuhlela Kweminyaka Emihlanu”
Ngo-Ephreli 2017, "Uhlelo Lweshumi Nantathu Lweminyaka Yokuthuthukiswa Kwezimboni Zokuphrinta" olukhishwe yi-State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television lwathi phakathi nesikhathi "sohlelo lweminyaka eyishumi nantathu", isilinganiso sokuphrinta kwezwe lami imboni ngokuyisisekelo izovumelaniswa nentuthuko yezomnotho kazwelonke, izuze ukwanda okuqhubekayo. Ekupheleni kwesikhathi “soHlelo Lweminyaka Emihlanu Lweshumi Nantathu”, inani eliphelele lomkhiqizo wemboni yokunyathelisa ladlula ku-1.4 trillion, likleliswe phezulu phezulu emhlabeni.
Ukuphrinta kwedijithali, ukuphrinta kokufaka, ukuphrinta okusha kanye neminye imikhakha kugcine ukuthuthuka okusheshayo, futhi ivolumu yokuphrinta ukuhwebelana kwamanye amazwe ibilokhu ikhula ngokuqinile; ukugqugquzela ukuguqulwa kokuphrinta kwamaphakethe kudizayini yokudala, ukwenza ngezifiso okwenziwe ngokwezifiso, kanye nezinhlelo zokusebenza zokuvikela imvelo, nokuxhasa izindlela zokuphrinta njengokuphrinta nge-offset, ukuphrinta kwesikrini, nokuphrinta kwe-flexo. Ubuchwepheshe beDijithali buhlanganisiwe futhi buthuthukiswa. Inqubomgomo kazwelonke yomkhakha wokupakisha nokuphrinta kwamaphepha inikeza ukwesekwa okuqinile ekuthuthukiseni imboni.
8. “Uhlaka loHlelo Lukazwelonke Lwezokuthuthukiswa Kwezamasiko kanye Nezinguquko ngesikhathi soHlelo Lweminyaka Eyisihlanu Lwe-13”
NgoMeyi 2017, uMkhandlu Wombuso wakhipha futhi waqalisa “Uhlaka loHlelo Lukazwelonke Lwezokuthuthukiswa Kwezamasiko kanye Nezinguquko phakathi Nesikhathi Seshumi Nantathu Seminyaka Eyisihlanu”, esabeka ngokusobala umbono oqondisayo kanye nezidingo eziphelele zokuthuthukiswa kwamasiko phakathi ne-13-Five Year Hlela isikhathi. Uhlaka luphakamisa ukukhuthaza uguquko kanye nokwenza ngcono izimboni zendabuko njengokushicilela nokusabalalisa, ukukhiqizwa kwamafilimu nethelevishini, ezobuciko nemisebenzi yezandla, ukuphrinta nokuphinda, izinsizakalo zokukhangisa, ezokuzijabulisa kwamasiko, kanye nokweseka ukuthuthukiswa kokuphrinta kwedijithali kanye nokuphrinta kwe-nano.
9. "Izindlela Nezinkombandlela Zokuhlola Okuhlaza Okotshani"
NgoMeyi 2019, i-State Administration for Market Regulation yakhipha i- "Green Packaging Evaluation Methods and Guidelines", eyayichaza izindlela zokuhlola ukupakisha okuluhlaza, izindlela zokuhlola, okuqukethwe kanye nefomethi yombiko wokuhlola wezidingo zekhabhoni ephansi, ukonga ugesi, ezemvelo ukuvikelwa nokuphepha kwemikhiqizo yokupakisha eluhlaza. Futhi ichaza okushiwo “ukupakisha okuluhlaza”: kumjikelezo wempilo ogcwele wemikhiqizo yokupakisha, ngaphansi kwesisekelo sokuhlangabezana nezidingo zemisebenzi yokupakisha, ukupakisha okungenabungozi kangako empilweni yabantu nasemvelweni yezemvelo, futhi kudla izinsizakusebenza namandla amancane.
Izindlela nemihlahlandlela yokuhlola okuluhlaza okotshani kuchaza izidingo ezibalulekile zobuchwepheshe besilinganiso sokupakisha okuluhlaza okuvela ezicini ezine: izimfanelo zensiza, izimfanelo zamandla, izimfanelo zemvelo nezimpawu zomkhiqizo.
Umkhiqizi wokuphrinta we-SmartFortune ube kule mboni (Enza ngendlela oyifisayo izincwadi zokuphrinta, wenze ngokwezifiso ibhokisi lesipho sephepha, wenze ngokwezifiso isikhwama sesipho sephepha) iminyaka engaphezu kwengu-25, wamukelekile ukusebenza nefektri yethu ukonga izindleko zakho.
Isikhathi Iposi: Jan-04-2021
INan Chang Road, chijiao Management Area, wang Niu Dun, dongguan, gd, China
© Copyright - 2012-2023: Wonke Amalungelo Agodliwe.